အင်တာနက် နည်းပညာ အတွက် စစ်အစိုးရ တရုတ် ထံ အရေးပေါ် အကူအညီတောင်းခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အင်တာနက် နည်းပညာ အတွက် စစ်အစိုးရ တရုတ် ထံ အရေးပေါ် အကူအညီတောင်းခံ
အင်တာနက် နည်းပညာ အတွက် စစ်အစိုးရ တရုတ် ထံ အရေးပေါ် အကူအညီတောင်းခံ
Posted by နွယ်ပင် on Dec 6, 2010 in Myanma News, News |5comments
မန်မာ စစ်အစိုးရ သည် လက်ရှိ နိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အင်တာနက်လှိုင်းသစ် လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်သော အစိုးရ ထိမ်ချန် ထားမှုများ ဖွင့်ချ ဖော်ထုတ် နေမှုကြောင့် အင်တာနက်သတင်း စီစစ်မှုတွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည့် တရုတ် နိုင်ငံမှ နည်းပညာ အရေးအပေါ် အကူအညီ ( Emergency Technology Aid) ကို ယူနေရပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှ စ၍ အင်တာနက် သုံးစွဲသူ လူငယ် အချို့သည် ဂူးဂယ် ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ဖွင့်လိုက်ပါက ယခင်လို www.google.com မပေါ်တော့ဘဲ www.google.cn ဆိုသည် တရုတ် အစိုးရ ၏ စီစစ်ဖြတ်တောက်မှုများ အောက်မှာ သတင်းများ သာပါသည့် ဂူဂယ်၏ တရုတ် ပြည်တွင်းဆိုင်ရာ အင်တာနက် စာမျက်နှာသာ ပေါ်လာတော့သည် ။
ထိုသို့ google.cn အင်တာနက် စာမျက်နှာသာ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့မှ နာမည်ကျော် Web Designer တစ်ဦး က မြန်မာ အိုင်အက်(စ)ပီ ကို တရုတ် က ထိန်းချုပ်လိုက်တာ လို့ သတင်းရတယ်။ တရုတ်က အင်တာနက် သတင်း စီစစ်ရေးကို ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုဖွဲ့ ပြီးတောင် ထိန်းချုပ်ထားတာ တရုတ် မှာ ဗဟို စစ်ကော်မရှင် ပြီးရင် ၊ အင်တာနက် စီစစ်ရေးကော်မရှင် ပဲ၊ အခု တရုတ် ဆင်ဆာ နဲ့ ဆိုတော့ အရင်လို မြန်မာ စာရိုက်ထည့်ပြီး မြန်မာသတင်းတွေ ထည့်ရိုက် လိုက်တဲ့အခါ မပေါ်တော့ဘူး ။ အခု ဆို Freedom News လည်းရှာလို့ ရတယ်။ ဖွင့်လို့ မရတော့ဘူး ဟု ပြောသည်။ မြန်မာတွေ ကွန်ပျူတာ သုံးတာကို တရုတ် က အလိုလို သိနေမှာ ဟု Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာ လ ၅ ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် အသံဖိုင် စဆုံးရပြီ ဆိုသည့် အီးမေးများဖြင့် ပါလာ သော Zip ဖိုင်များကို ဖွင့်လိုက်ရာတွင် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်မှု စနစ်ကို ဖျက်ဆီးသည့် နည်း ပညာ ပိုးမွှားများ နှင့် တရုတ် Pornography ဗီဒီယိုများ လည်း သိုလှောင်မှု မှတ်ဥာဏ် အပြည့် ကျလာသည်ကို တွေ့ ရှိရသည် ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ထဲ ရှိ အင်တာနက် ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက မူ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အင်တာနက် စနစ် ကိုတခြား နိုင်ငံ တစ်ခု က ထိန်းချုပ် ထားတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ အတွက် မကောင်း ဘူးဟု သူမ၏ အမြင် ကို ပြောသည်။
ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့နေရာ အချို့တွင် www.google.cn သာပေါ်သော်လည်း စစ်အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော် တွင် မူ www.google.com ပေါ်ကြောင်း နေပြည်တော် ရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီး ဌာန မှ ၀န်ထမ်းတစ် ဦး က FNG သို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အင်တာနက် ကွန်ယက် ခွင်ကို အသုံးပြု၍ လူငယ်များ နှင့် ထိတွေ့ ဆက်ဆံ ချင်သည် ဟု ပြောဆို ထားသည်။
မြန်မာနိုင် ငံတွင် ပြည်သူများ က အင်တာနက် ကို အခြား ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများထက် ဆယ်စုနှစ် တစ်ဝက်ကျော် နောက်ကျပြီး မှ သုံးစွဲရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရ သည် အင်တာနက် ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှု အတွက် တရုတ် နည်းပညာကို မှီခိုကာ ကြား လော်ဘီ များ ၏ စွမ်းဆောင်မှု ဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံထုတ် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု နည်းပညာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် များကို လည်း ဒေါ်လာ သိန်းချီ အကုန် ခံ၍ ၀ယ်ယူသည်။
ဂူးဂယ်လဲ နှင့် တရုတ် သည် ယခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ က ကျလိကျလိ ဖြစ်ကြပြီးနောက်အပေး အယူ တစ်ခု (Deal) ဖြင့် ပြန်လည် ညှို နှိုင်း အဆင်ပြေခဲ့သည်။
လတ်တလောတွင် မြန်မာတို့ အသုံးများသည့် လူမှု ကွန်ယက်များတွင် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် ၏ ဗီဒီယို ဖိုင်များ အပြင်၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး မောင်အေး ၏ မိမိ ကိုယ်ကို သတ်သေသွား သည့် ကိုယ်ရေး အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှုးကြီး ဘိုနေ၀င်း ၏ ဇနီး ဖြစ်သူ က ထောက်လှမ်း အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး (ယခု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ) ၏ ဧည့်ခံပွဲတွင် ထင်တိုင်းကြဲ နေသည့် လေးမိနစ်စာ ဗီဒီယိုသည်လည်း အင်တာနက်တွင် ပြန့်နေသည်ဟု သိရသည်။
စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ… တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး နှိပ်စက်နေတာပဲ၊ ကြောက်လည်း ကြောက်တတ်သေး…
အားလုံးကို စိုးရိမ်နေတာကိုက အများမှာ ထိခိုက်နစ်နာ ကြရပါသည်
ဒုက္ခ ဒုက္ခ အမြဲပဲနည်းစုံစဉ်းစားနေရတာ သူတို့ရော အိပ်ကြရသလားတောင် စဉ်းစားရမယ်နော်
အ မှန် က အဲ လို လုပ် ဖို. မ လို ဘာ ၀ူး ဗျာ …. ရတနာပုံ ၀က် ကြီး hack ခံ ရ တုန်း က စာ အ တိုင်း လုပ် လိုက် ရင် ပြီး နေ တာ ကို …. အဲ စာ က “ဦး သန်း ရွှေ ဒီ ဆိုဒ် ကြီး ပြန် ကောင်း ခှင် ရင် ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ကို အာ ဏာ လွှဲ လိုက် တော. ” တဲ. အ ခု လည်း ပြန် ကောင်း ချင် ရင် …..